Last updated: Chivabvu. 26 2018 | 2 Maminitsi verenga
Tose tinoziva zvakanaka chete sei pabonde inogona kunzwa asi havana uchiziva kuti zvepabonde chaizvoizvo utano kwamuri?
Bonde kunobatsira kuchengeta yenyu zvirwere kushanda zvakanaka. Vanhu vane kakawanda pabonde chaizvoizvo dzine kwevari anowanikwa hunovhikira muviri wako pamusoro utachiona, mavhairasi, uye nezvimwe nevanyanyisi. Ehe saizvozvo, zvinonzi vanotiwo kuti iwe tirambe takamuka, kudya utano, uye kuwana zvakakwana hope nechokwadi chokuti yako zvirwere anoramba vanofara.
Sex boosts libido. Pabonde kuchaita kuti zviri nani asi zvichanaka libido yako. vakadzi, pabonde kunowedzera kusangana nekutsi kwemukadzi lubrication, ropa kuyerera, uye elasticity, zvose kuita zvepabonde anzwe zviri nani apo pakusika kukara zvikuru.
Bonde paaka- BP. Pane kutsvakurudza kuti zvinoratidza kuti pane kubatana pakati pabonde uye ezasi BP. Sex uyewo paaka- chemwoyo mukana. Kuwedzera pakuva nzira yakanakisisa kuchengeta mwoyo wako zvazvingava kukwira, pabonde kunobatsirawo kuchengeta inonzi estrogen uye testosterone mumatunhu ari pakati nepakati.
Bonde sechinokosha sezvo muviri. Nepo hachizoswederi kutsiva kwenyu kwese cardio Workout, naro Zvechokwadi zvinobatsira. Kazhinji, pabonde anopisa anenge mashanu macalorie paminiti kuwedzera bumping kukwira mwoyo wako mwero uye kushandisa dzakasiyana tsandanyama.
Sex kunogona kuderedza marwadzo. Ungave uri kurwisana migraine kana marwadzo, pachinzvimbo ichitora asipurini, edza kuva zvepabonde. Panguva imwe zvepabonde, hormone asunungurwa kuti inobatsira kusimudza yenyu marwadzo shiviriro. Kunyange kubwaira isina zvepabonde zvinogona kubatsira kuderedza marwadzo.
Sex anogona kuderedza mikana kwevanhu nekenza yeprostate. Kumwe kuongorora kunoitwa Journal of American Medical Association ichangopfuura rinoti kuti varume ejaculated kazhinji (dai wango 21 nguva mwedzi) kashoma kuwana kenza yeprostate.
Sex kunonatsiridza hope. Vanhu vanowanzoda nehope nokukurumidza pashure pabonde, kunyanya pane chiri zvepabonde zvinobatanidzwa. Pashure zvepabonde, hormone prolactin asunungurwa iri zvinoita kuti manzwiro Kurara uye kutandara.
Pakupedzisira, pabonde kunobatsira kuti asanyanya kunetseka. kuva pedyo, mumuviri nomupfungwa, kuti mudiwa wako anogona kunyevenutsa, pakutambudzika, uchingodzikira kufunganya. Bata uye vachimbundirana kunogona kusunungura inongoitika “kunzwa zvakanaka kemikari” apo chokuita zvepabonde amps yako mafaro uye mubayiro ezvinhu kuburikidza kwokusunungura uropi mushonga. Sex uye mumuviri uye mupfungwa hwepedyo kunogonawo vaonekere nokuzviremekedza uye mufaro.
Sezvaunogona kuona, pabonde haazorambi chete kutungamirira upenyu hunofadza asi utano mumwe zvakare.
Ndinorangarira pandakatanga kudanana. Uye ndinofunga chokwadi zvimwe…